Shiinaha EEG warshadda CS2 iyo soosaarayaasha | Foton
Dhiibitaan heer sare ah iyo khibrad wadis ayaa kuu horseedaya mustaqbal aragti fog
Nooca Shidaalka Naaska / Shidaalka
Nooca Wadista 4 * 2
Qiiqa Euro IV / V
Saldhigga Gawaarida 2570/3110
Mashiinka 4JB1-70 KW / F2.8-96 / 110 KW
Laga dhaxlay dhaxal ahaan loona hibeeyay hal-abuurnimo, VIEW S waxay muujineysaa hawo xarrago leh faahfaahin kasta oo naqshadeynta ah. Raadinta kaamilnimada booska, waxqabadka, amniga iyo shaqaynta weligeed ma dhammaanayso.
ISF2.8-Awoodda xudunta u ah Cummins; 96KW-Awood adag; Awood adag-Mid ka mid ah makiinadaha naaftada ah ee tamarta-litir ugu sareeya adduunka; Matoorku wuxuu leeyahay wax soo saar miisaanka 280N.M oo 22.5% -60% ka sareeya kuwa alaabada la midka ah; Soosaarka ugu sarreeya ee ugu sarreeya 1400 r / min; 8.3L-Isticmaalka shidaalka 100 kiilomitir.
ISF 2.8 mishiinka naaftada wuxuu bixiyaa injineernimada kuleylka sare, isdhexgalka elektarooniga ah, Nidaamka Shidaalka Sare ee Cadaadiska Sare iyo qashinka turbocharger, kaas oo ku habboon codsiyada gawaarida ganacsiga fudud.
AWOOD: 107 - 160 hp
SHAHAADADA: EURO 3
In-line 4-dhululubo, 16-waalka, SOHC, multiport EFI
Ansixinta labada dheelitirka dheelitirka, faleebada haydiga, cududda dhagaxa leh ee irbadda wadata, isku dhafka weyn ee isku dhafan iyo foojarka
Waxay ka kooban tahay awood sare, dhisme is haysta, gariir hooseeya, buuq hooseeya, isticmaalka shidaalka oo hooseeya, qiiq yar, iwm.
Mechatronic (xakameynta gudbinta isku dhafan)
ASIS - istiraatiijiyad isbeddel ku habboon
Qiyaasta awoodda-miisaan-culus (oo ku saleysan astaamaha dejinta qalabka 'Lepelletier gear')
Dirawal / dhinaca rakaabka hore bac laba hawo leh
Dubbe Ammaanku wuxuu kordhiyaa cunsurka nabadgelyada marka xaalad degdeg ahi jirto
Daaqada Ka Baxsiga Dusha Sare
Daaqada baxsashada dusha sare waxay xaqiijineysaa amnigaaga
Dab-bakhtiiye Heer Sare
Royal Saloon Royal Saloon waa nooca loogu talagalay qoyska iyo ganacsiga labadaba. Iyada oo leh gudaha raaxada, meel ballaaran iyo codsiyo lagu kalsoon yahay oo loogu talagalay raaxada iyo amniga, waxay daryeeli kartaa qof walba oo ka weyn.
Nooca Taageerada Taageeraha ayaa qancinaya baahiyaha wareejinta rakaabka. Iyada oo leh qaabab kala-duwan oo kuraasta ah, awoodda 14-17 rakaab ah ayaa la heli karaa.
Transor Transor nooca waxaa loo sameeyay wareejinta xamuulka. Awoodda xamuulka ugu badan waxay gaari kartaa 2000 litir.